TogaHerer: ABWAAN HEES NAQDI AH U SAMEEYAY MADAXWEYNE RAYAALE
ABWAAN HEES NAQDI AH U SAMEEYAY MADAXWEYNE RAYAALE
Suugaantu dhaqan ahaan waa shayga ugu muhiimsan ee bulshadda Af-soomaaliga ku haddashaa isugu tabiso waayaaha nololeed iyo dareenadda dhinaca siyaasada, wacyilgilinta iyo cabirka afkaarta taagan.
Sidoo kale, waa haanta kaydisa taariikhda xoolo dhaqatadda geeska Afrika. Sidaa darteed, Suugaan-yahanku inta badan tixdiisa ma gudbiyo illaa shinkeedu soo gallo, haddii aanu u miidaan dayin oo murti aan xiligeedii joogini ka baxdana ma tisqaado, qiimo ahaana hoos ayay u ridaa kaalinta Hal-abuurka curiyaa tixdaa ka hordhacday xiligeedu kaga jiro Bulshadda.
Maanta oo aynu ku jiro xilli casri ah, dhaqankaasi wuu muuqdaa, waxaana kuugu daliil ah inta Saxaafaddu dhaliil sheegaysay ee maamulka Somaliland ay si guud iyo si gaar ahba u duraysay laguma sheegin fagaarayaasha Fanaan ku luuqaynaya hees toos uga hadlaysa Xaaladda siyaasadeed ee Dalka, Islamarkaana muujinaysa qaladaad maamul imika ka hor. Waxa toddobaadkii ugu danbeeyay Shacbiga Somaliland Aaladaha Casriga ah iyo Telefoonada Gacanta lagu qaato isugu tabinayeen Heeso toos u duraya Maamulka Madaxweyne Daahir Rayaale.
Heesahan Cusub ee dhaliisha ah waxaa Curiyay Abwaan Jaamac-Riyo, oo xalay u waramay Wargeyska Geeska Afrika, waxay heestiisu ka hadlaysaa, ku tagri fal awood dawladeed oo dhinac kasta ah. Islamarkaana, tilmaamaya In Xukuumada Rayaale gabtay oo ilowday arrimihii Shacbigu u igmaday.
Haddaan soo fool-tabiyo heesahan, waxa midkood Abwaanku ugu wanqalay sida uu Wargeyska Geeska Afrika u sheegay Dilaal. Waxa heestan maalmo dhawr ah ka hor la saaray miyuusig iyo cod ay koox hablo isugu jiraa wada jir isugu jiibinayaan. Waxaana Erayaddeeda ka mid ah.
Xilkaanu kuu dhiibanee, Naf iyo dhimashaba lahaa
La dheeliday dhoon wareegtay, Amaanadii dhawri weyday
Dhitiyo kaydkii Idlaysay, Khayraadkii dhoobo qaaday
Addoo dhagar-maal u muuqda, Dhaliili dushaada taalo
Ku jira dhoobo iyo ceeb, Ayaamihii kaa dhamaade
Mudiyo dheeraad ku siiyay, Sidaadii dhaami weyday
Ka dhaadhac Dhiishaadu Ma buuxsantee Ka dhaadhac
Dilaal noo dhuuntayow, Ka dhaadhac
Dhalaan qadiyow ka dhaadhac
Xilkaanu kuu dhaariniyo Dhismahii Somaliland
Dhantaashay Dhaqaajin Weyday, Dhaqmaati Adaa u diidey
Dhacdiyo Taariikh xun reebay, Dhul iyo Daaraba Xaraashay
Dantaad Dhaawaca ku boobtay, Anaa dhayi Nabaradeedee
Ninkaan Dhaanka u diree Isagu Soo dhaansadow
Dhalaan qadiyow ka dhaadhac.
Abwaan Jaamac Riyo heestiisan kor ku xusan, waxa wehelisay hees kale oo meerisyadeedu jawaab u yihiin hees hore oo uu ku taageerayay amaan iyo ducana ugu daray xilka Madaxweyne Rayaale. Si aynu jawaabta heestani ku timi iyo sheekadeeda si hufan ugu fahano, malaha waxaa haboon in aynu tuduc iyo laba ka xusno heestaa hore ee abwaanku kaga afeefanayo Heesta labaad, aan sidaas yeelo oo aan marka hore is xusuusino heeska hore. Waxaa Abwaanku waqtigaas hore curiyay hees midheheeda ay ka mid-yihiin;,
Somaliland ullashadeed, uurkaad daacad uga tahaye
Daahirow Insha Alaah, Anba qaadka geediga iyo
Saadaashu waa Addigee, Udub-kiyo dhigtaba hay
Halkaa markay marayso, haddii murti-yahanku curiyo mid kale oo lid ku ah ducadaas kana soo hor jeeda, la yaab ayay noqonaysaa. Si markaa, uu qiil ugu hello dhinacan kale ee uu wax ka eegay waa inuu ka affeeftaa, islamarkaana sheegaa in aadamigu qaldamo.
Howraareey run timi
Murti tidhi hubsiimadda
Hal-dhan baa la siistaa
Nin Ay hooyo dihatana
Hal ma seegi waayee
Hirkii Ii ifaayow
Adna hoos ka madhan timi
Dhigtaan hay ku idhi shalay
Markaad hanan weyday Timi
Inaan Hoodada raree
Sidii Hoohida na dhaaf
Sharkaaguna kaa horee
Xeerkii Hagi lahaa
Hawsha u galeen
Harga madhan sidow
Addaa Heeray oo
Hanjabaad Ku daray
Sharkaaguna kaa horee.
Heeskan danbe ee heesta aan qalmday, Abwaanka tiriyay laftiisa ayaa ku luuqaynaya.